Oge gọọmentị nke Canada
Kedu oge bụ afọ nke afọ Canada?
Ọ bụrụ na ị na-emeso ụlọ ọrụ na -azụ ahịa n'ihu ọha ma ọ bụ òtù gọọmenti, ị mara na ha na-edebe kalenda ọzọ maka ihe ndị dịka ego ego na ego na ego. N'ọtụtụ ọnọdụ (ma ọ bụghị ihe niile), kalenda afọ nke afọ ha na-eso abụghị ụkpụrụ January 1 ruo December 31.
Maka ebumnuche nke ntinye akwụkwọ na akụkọ ego, ụlọ ọrụ na gọọmentị na ọtụtụ mba na-agbaso ihe a maara dịka afọ nke ụtụ isi.
N'ikwu ya n'ụzọ dị nkenke, afọ ego gọọmentị bụ afọ ego nke otu nzukọ maka ebumnuche akaụntụ. Ọ bụ izu ụka 52 na-adịghị agwụ na Dec. 31.
Afọ ụlọnga maka ọtụtụ ụlọ ọrụ America, karịsịa ndị edepụtara na mgbanwe ihu igwe ọha, bụ nke July 1 ruo June 30.
Kalịnda otu ụlọ ọrụ ma ọ bụ nzukọ na-esote ihe na-ekpebi otu esi atụ ụtụ isi ya na ego ya site na ụtụ isi dịka Ụlọ Ọrụ Ego-ntinye na United States. ma ọ bụ Canada Revenue Agency na Canada.
Afọ gọọmentị nke ọchịchị gọọmenti etiti Canada na ndị gọọmenti etiti obodo na mpaghara obodo bụ April 1 ruo March 31, dị ka ọtụtụ ndị isi obodo Britain (na Britain n'onwe ya). Nke a dị iche karịa afọ ụtụ maka ụmụ amaala Canada, nke a bụ ọkọlọtọ January 1 ruo December 31. Ya mere ọ bụrụ na ị na-akwụ ụtụ isi ụtụ isi na Canada, ị ga-agbaso afọ kalenda.
Enwere ọnọdụ ụfọdụ nke azụmahịa Canada nwere ike ịrịọ ka a gbanwee ya na kalenda afọ ya. Nke a chọrọ akwụkwọ ederede na Service Canada Revenue Service, a gaghị eme ya naanị iji nweta uru ụtụ isi ma ọ bụ n'ihi ihe ndị dị mma. Ọ bụrụ na ịchọrọ mgbanwe na afọ nke ụlọnga gị, kwadebe ịkọwa ihe kpatara CRA.
Nke a bụ ihe atụ nke ezigbo ihe mere eji agbanwe afọ afọ nke ụlọ ọrụ: Ụlọ ọrụ nchịkọta mmiri na Joe na-arụ ọrụ ọnwa 12 n'ime afọ, ma ọ na-ere obere ọdọ mmiri ma na-enwe obere nlekota na oyi karịa n'oge mmiri na ọkọchị . Maka Joe, ọ na-eme ka ụkọchị ego mee ka ọ rụọ ọrụ na kalenda afọ na-emefu ego nke na-ejikọta ya na nsụgharị nke azụmahịa.
Enwere ebumnuche azụmahịa ndị ọzọ dị mma maka iji oge kalenda nke afọ ofufo.
Ebumnuche nke kalenda ego ego
Maka ụlọ ọrụ ndị iwu kwadoro ka ha nweta ego ha nyochaa, ọ ga-abụrịrị ụgwọ-akwụ ụgwọ iji gbaa ndị nọnye ego na ndị na-edekọ ego ụgwọ na oge nke afọ, mgbe ndị na-akwadebe ụtụ isi dị ala.
Nke a abụghị naanị ihe mere ị ga-eji soro kalenda ọzọ. Maka akwụkwọ gọọmenti, na-esote afọ nke ụtụ isi nke na-emetụta afọ agụmakwụkwọ (July 1 ruo June 30, dịka ọmụmaatụ) na-eme ka uche karịa afọ kalenda nke ga-agwụ mgbe afọ akwụkwọ gụchara ọkara.
Ahịa ụlọ ahịa ndị na-ahụ ọtụtụ n'ime ego ha na-enweta n'ụdị onyinye ịzụ ahịa ezumike nwere ike ịhọrọ ịgụnye December na Jenụwarị na otu nkeji iri na ise iji nweta ihe ndekọ gbasara ego, karịa ikwe ka December skew afọ niile nke ego.
Otu esi esonyere RCMP
Ebee Chọta Enyemaka Site na Ụtụ Isi nke Canada
Oge nchịkọta oge nke Nkọwapụta nke afọ 1970 nke Ọktoba
Child Car Safety na Canada
Ụgwọ ụgwọ nke Canada MPs 2015-16
Ndị na-azụ Ụlọ
Onyinye Eze nke Eze na-eme ka ego ghọọ Iwu na Canada
Otú Canada si nweta aha ya
Ụdị Krismas Krismas
Kedu obere obere nwa na-eto eto nke Christmas Carol bịara
Ugwu Obere University Admissions
Na-eleghachi Anya n'Oge Agha Ntụte Taa
The Scottsboro Case: A usoro iheomume
Ụlọ akwụkwọ nke Staten Island Admissions
Nkọwa nke Xenophobia na ihe atụ iji kọwaa Omume
Venus na Gemini - Ihe ngosi ima
Agha Neapolitan: Agha nke Tolentino
Ihe ndị dị na Maglev na-emepụta ihe ndị dị na ya
Ogologo oge ise nke mgbakọ nke afọ iri gara aga
The Top 10 Atụmatụ maka Ịzụ ihe a akwụkwọ Pre-ekesịpde Jiri ụgbọala
Ndi Afrika na ndi Afrika no n'Afrika
A na-ele Kalinda nke Alakụba na 2022 (1443-1444 AH)
Ịkọwapụta Shotgun amalite na Goofu asọmpi
Kedu ihe bụ ọdịiche dị n'etiti Cubic Zirconia na Cubic Zirconium?
Osisi na Mpịakọta Na-ejikọta Ọnụ
Agha Mexico na Amerịka
SBA nyere Online 8 (a) Ngwa Mmemme
A Touch of Royalty: 10 Ihe nkiri na-achịkwa Movies
Mụta iji French Expletive 'Connard' na Mkparịta ụka
Njirimara N'amaokwu Na-egosi Ịhụnanya Nkwekọrịta
Apollo na Marsyas
Ngwọta Aqueous Chemical Reaction Problem